Onye nbiputa | January 2020
Nhicha dị ọcha nke ngwa ngwa HP
Mgbe obibi akwụkwọ na ihe nbipute dị mfe na-eme ka ọtụtụ ájá na mpempe ndị ọzọ dị oke mkpa. Ka oge na-aga, nke a nwere ike ime ka ngwaọrụ ghara ịrụ ọrụ ma ọ bụ mebie àgwà obibi. Ọbụna dịka ihe mgbochi, ọ na-atụ aro mgbe ụfọdụ iji mezicha ngwa ngwa iji zere nsogbu n'ọdịnihu.
Ihe ntanetị HP na-ehicha
Ọ bụrụ na ịmalite ịhụ na njọ na-ebipụta àgwà, ọnyá na-apụta na mpempe akwụkwọ ahụ, ụfọdụ ihe anaghị ahụ anya ma ọ bụ enweghị ụkpụrụ ọ bụla, ọ na-atụ aro ka ị hichaa isi akwụkwọ. Na-esote, anyị na-elele anya otu esi eme nke a maka ndị na-ebipụta HP. Hichaa isi nke mpịpị HP Nke isi mmalite bụ isi ihe dị mkpa nke ngwaọrụ ọ bụla inkjet.
Ọnụ ọgụgụ nke ngwa kọmputa na-eto eto kwa afọ. N'otu oge ahụ, nke bụ ihe ezi uche dị na ya, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ PC na-arịwanye elu, ndị na-amatakarị ọtụtụ ọrụ ndị bara uru ma dị mkpa. Ndị dị ka, dịka ọmụmaatụ, ibipụta akwụkwọ. Idepụta akwụkwọ site na kọmpụta gaa na ngwa nbipute Ọ ga-adị ka ị bipụta akwụkwọ bụ ọrụ dị mfe.
Ịwụnye katriji na ntanetị Canon
Mgbe oge ụfọdụ, tankị ink na-ebipụta ihe efu, oge eruro iji dochie ya. Ọtụtụ cartridges na ngwaahịa Canon nwere usoro FINE ma na-etinyekwa na otu ụkpụrụ ahụ. Ọzọ, anyị ga-aga site na nyocha nyocha usoro ntinye nke tankị ink nke ọhụrụ na mkpụrụ akwụkwọ obibi nke ụlọ ọrụ ahụ a kpọtụrụ aha n'elu.
Kedu ka esi kpochapụ nsụgharị na-ebipụta na mpịakọta HP
Maka ụlọ ọrụ, enwere ọtụtụ ndị na-ebi akwụkwọ, n'ihi na nnukwu akwụkwọ ndị e biri ebi n'otu ụbọchị bụ nnukwu nnukwu. Otú ọ dị, ọbụna otu onye nbipute nwere ike jikọọ na kọmputa dị iche iche, nke na-eme ka eserese na-ebipụta mgbe niile. Ma gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ndepụta dị otú ahụ bụ mkpa dị ngwa iji kpochapụ?
Gịnị ma ọ bụrụ na enweghị mpịakọta HP
Nsogbu na onye nbipute - nke a bụ egwu n'ezie maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ ngwa ngwa ịgafe ule. Ndepụta nke mmebiri ndị nwere ike dị oke obosara na ọ gaghị ekwe omume ikpuchi ha niile. Nke a na-adaba na ntinye aka na ọnụ ọgụgụ nke ndị nrụpụta dị iche iche, nke, ọ bụ ezie na ha ewebataghị nkà na ụzụ ọhụrụ, mana ha na-eweta "ihe ịtụnanya" dị iche iche.
Esi tinye fanyeeji n'ime ihe odide HP
Kwagharị ink na ọtụtụ ụdị nbipute HP bụ nnwefe na ọbụna rere ya iche. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwe akwụkwọ obibi akwụkwọ na-eche ihu na ọnọdụ ebe ọ dị mkpa itinye fanye n'ime ya. Ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ nwere ọtụtụ ajụjụ metụtara usoro a. Taa, anyị ga-agbalị ịkọ ihe niile gbasara usoro a.
Esi mee ka imejuputa ihe ntanetị nke Canon
Iji ngwa nbipute bu ego efu. Akwụkwọ, agba - ndị a bụ ihe dị iche iche, na-enweghị nke enweghị ihe ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ihe niile dị mfe site na enyemaka mbụ na mmadụ enweghị mkpa iji ego buru ibu iji nweta ya, mgbe ahụ ihe nke abụọ dị ntakịrị. Otu esi mejupụta ihe ntanetị akwụkwọ ntanetị nke Canon Kedu kpọmkwem ụgwọ nke inkjet drawer na-eduzi mkpa ọ dị ịmụta banyere otu esi mejupụta ya n'onwe gị.
A na-eji nwayọọ nwayọọ dochie nsụgharị akwụkwọ a. Otú ọ dị, eziokwu bụ na ọtụtụ ihe dị mkpa ma ọ bụ foto ndị echekwara na akwụkwọ ka dị mkpa. Kedu otu esi emeso nke a? N'ezie, nyochaa ma chekwaa na kọmputa. Nyocha akwụkwọ na kọmputa Ọtụtụ ndị amaghị otú e si iṅomi, na mkpa maka nke a nwere ike ibili n'oge ọ bụla.
Otu esi ejikọ Canon LBP2900 na kọmputa
Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ kwesịrị ịnweta akwụkwọ obibi akwụkwọ mgbe nile. O nwere ike ịbụ obere faịlụ ederede ma ọ bụ nnukwu ọrụ. Ka o sina dị, maka nzube ndị a, ọ dịghị achọ ka mpe akwụkwọ dị oke ọnụ, ụdị ego ego zuru ezu Canon LBP2900. Ijikọ Canon LBP2900 na Kọmputa Ihe nchịkọta dị mfe iji rụọ ọrụ abụghị nkwa na onye ọrụ agaghị achọ ịnwụnye ya.
N'ime oge obibi, ihe nbipute ahụ anaghị arụ ọrụ, ma mgbe ụfọdụ, ọ ga-adị mkpa ịrụ ọrụ nlekọta ụfọdụ. Ndị a na-agụnye nhicha ahụ. Ọ ga-ewe ọtụtụ afọ tupu mkpa ịdozi nsogbu a, ma ka ọ fọrọ nke nta ka ndị nwe ụlọ obibi akwụkwọ na-eche ya ihu.
A ga-egosiputa onye nbipute na listi ngwaọrụ nanị ma ọ bụrụ na agbakwunyere ya site n'ịme ụfọdụ manipulations. A naghị achọpụta ihe ọ bụla mgbe niile, ọ bụ ya mere ndị ọrụ ga-eji aka ha rụọ ọrụ niile. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na ọtụtụ ụzọ ọrụ maka ịgbakwunye ngwaọrụ obibi na ndepụta nke ndị na-ebi akwụkwọ.
Ndozi nsogbu nsogbu na-ebipụta mgbe ịchisịrị
Ink na ihe nkwụnye ngwa ngwa na-agba ọsọ, n'ihi ya, ọ ga-emezigharị iji nweta akwụkwọ ndị ọzọ mgbe e bipụtara ya. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọ na - eme na mgbe ị wụnye batrị ọhụrụ ma ọ bụ njuputa ya, àgwà ibipụta na - adalata. Enwere ọtụtụ ihe kpatara nsogbu a, nke ọ bụla nwere ngwọta ya.
Nchọpụta nsogbu na-emepe ọkachamara na ịgbakwunye Ọkachamara
The Add Printer Wizard na-enye gị ohere iji aka wụnye onye nbipute ọhụrụ na kọmpụta gị site na iji ike Windows rụọ ọrụ. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, mgbe ọ malitere, ụfọdụ njehie na-egosi na enweghị ike ọrụ. E nwere ọtụtụ ihe kpatara nsogbu a, nke ọ bụla nwere ihe ngwọta ya.
Kedu ka esi nyochaa na pịpị HP
Akwụkwọ edemede nyocha nwere ike ịdị mkpa dị ka ọdịdị, na ezinụlọ. Usoro ihe omumu maka nkuzi na ulo akwukwo nwere ike ime ka ihe di mkpa, ma okwu nke abuo nwere ike inwe nchegbu, dika ima atu, idebe akwukwo bara uru, foto na ihe ozo dika nke a. Emere nke a, dịka iwu, n'ụlọ.
Ịchọpụta Adreesị IP nke Printer
Ugbu a, ndị na-ebi akwụkwọ, scanners na ngwaọrụ multifunction jikọọ na kọmputa ọ bụghị naanị site na njikọ USB. Ha nwere ike iji uzo nke netwọk mpaghara na Internet ikuku. Site na ụdị njikọ ndị a, a na-enye akụrụngwa ya adreesị IP, bụ nke ezi mmekọrịta ya na sistemụ arụmọrụ pụtara.
Tọgharịa Nwanna Mbipụta Toner Counter
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị niile nke ndị na-ebipụta Nwanna na MFPs nwere usoro nwere mgbidi pụrụ iche nke na-edowe akwụkwọ ndị e biri ebi na igbochi ink ma ọ bụrụ na ọ ga-akwụsị. Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ, jupụta na katriji, na-eche nsogbu enweghi ike ịchọta toner ma ọ bụ ọkwa ga-achọ ka ọ gbanwee ya.
Ka a na-ebipụta akwụkwọ, a na-agbanye onk nke ink n'ime akwụkwọ. Ihe si na ya pụta bụ ịmepụta ihe na agba na akpa nke e mere maka nzube a. The printer Canon MG2440 na-edekọ ihe ndekọ nke ndị na-ede akwụkwọ, mgbe ọ juputara, gosipụtara ọkwa ngosi.
Ebipụta foto 10 × 15 na ngwa nbipute
Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ nwere mkpa iji bipụta foto nke nha 10 site na 15 sentimita. N'ezie, ị nwere ike ịkpọtụrụ nkwurịta okwu nlekọta pụrụ iche, ebe ndị ọrụ, na-eji ngwá ọrụ dị elu na akwụkwọ, ga-eme usoro a maka gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ụlọ nwere ngwaọrụ kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ime ihe niile n'onwe gị.
https://termotools.com ig.termotools.com © Onye nbiputa 2020